I-Connoles Cottage ngaselwandle - I-Airbnb
I-Connoles Cottage ngaselwandle
I-Connoles Cottage yiflethi okanye indlu ekwicomplex esandul 'ukulungiswa kwi-Wild Atlantic Way. "Indawo yethu engcwele ngaselwandle" igciniwe phantsi kwentaba ejongene neGalway Bay, Iziqithi zeAran kunye neentaba zaseConnemara. Indawo yayo emangalisayo ejongene noLwandle, yenza le ndlu ibe yindawo entle yokubuka iFanore kunye nolwandle lwayo olungacetywanga, iBurren, iiNtaba zaseMoher, iLahinch & Irelands Traditional Music Capital - iDoolin.
UKUBUKA ULWANDLE okumangalisayo kuyabonakala kuzo zonke iifestile ezisemaphandleni!
Le ndlu ikumgangatho ophezulu yenziwa kwigumbi lokulala elinye (elinebhedi elala abantu ababini) kunye nekhitshi/indawo yokuhlala. Zonke iifestile neminyango ziqhayisa ngokubuka ulwandle.
Isidlo sangokuhlwa kunye nezidlo zakusasa ezipakishiwe (ezidumileyo phakathi kwabantu abahambahambayo) zinokunikezelwa ngesicelo sangaphambili. Nceda uthumele umyalezo kumnikazi ukuze ukhangele kuqala ukuba iyafumaneka na kunye namaxabiso. Enkosi.
4.99 · Izimvo eziyi-257
IFanore yilali enomtsalane ngaselunxwemeni kwi-Wild Atlantic Way. Inonxweme olumangalisayo lwesanti, ibhari, icawa, ivenkile kunye neofisi yeposi, ikhefi (evula ehlotyeni kuphela). Inemizila emininzi eluhlaza ethandwa kakhulu ngabantu abahambahambayo. Yimizuzu eyi-15 kuphela ukusuka eDoolin, eyindawo Yomculo Yomthonyama yaseIreland kunye neDoolin Pier apho umntu anokuhamba ngesikhephe esiya kwiziQithi zeAran.
Iindlela ezimangalisayo zokuhamba ngeenyawo eziluhlaza ukuze ubuke.
Isikolo se-Aloha Surf sabathandi be-surfing njengabantu abaqalayo
Kakhulu okanye kancinci njengoko undwendwe lwethu lunqwenela